Pataloha vinyl - fironana tonga manitsakitsaka | Bezzia
Pataloha vinyl, ny fironana izay tonga ny fanitsakitsahana
Susana godoy | | fironana
ny pataloha vinyl Izy ireo dia iray amin'ireo fironana izay hanamarika ny taona 2018. Na dia efa hitantsika aza fa ny pataloha mahia mahia dia nanamarika teo aloha sy aorinan'ny fomba fanaontsika, ankehitriny kosa dia nihataka lavitra kokoa izy ireo. Vinyl dia miverina eny an-dalambe mba handrendrika ireo fijery rehetra amin'ny lalany.
Tsy isalasalana fa ny iray amin'ireo lamaody tany am-boalohany izay efa hitantsika izao. Miaraka amin'ny fatra mamirapiratra kely dia efa zava-misy ireo pataloha ireo ankehitriny. Ho fanampin'izay, noho ny fahombiazany, dia toa samy hafa endrika sy endrika ary endrika mombamomba azy ireo no nahatonga azy ireo hino kokoa. Jereo izy ireo!
1 Mitambatra ny pataloha vinyl
2 Pataloha vinina avo lenta
3 Ny maha-izy azy ny pataloha vinyl
Mitambatra ny pataloha vinyl
Raha efa originality ny pataloha vinyl dia alao sary an-tsaina izany amin'ny loko feno. Eny eny, efa zava-misy io. Ka ny iray amin'ireo loko quintessential izay hiaraka amin'izy ireo dia ho mena. Toa io tonony io dia mitovy lalandava amin'ny filan'ny nofo sy ny tsiro tsara. Noho izany, tsy misy tsara noho izy afaka mamirapiratra toy ny teo aloha tamin'ny alàlan'ny lamba manokana toa an'ity. ny vinyl mena tonga lafatra foana izy ireo mba hifanaraka amin'ny tampony mainty. Azonao atao ny mampiditra fomba famakiana tany sy misafidy ireo t-shirt na tendrony rocker be indrindra.
Mazava ho azy, hanombohana amin'ity fironana vaovao ity, angamba azonao atao ny misafidy ny tonony lehibe. Fantatsika fa hahomby foana isika amin'izany. Ny loko mainty dia iray amin'ireo filokana lehibe amin'ny fombantsika. Ho fanampin'izany, amin'ity tranga ity dia manana ny fahafaha-manao a Pataloha mahia. Na dia azonao omena azy aza ny fomba tianao, dia marina fa ireo karazana pataloha ireo dia mandeha tsara amin'ny mahazatra indrindra.
Pataloha vinina avo lenta
Ny iray amin'ireo filokana matanjaka indrindra izay entin'ireny karazana pataloha ireny dia ny fiakarana avo. Na dia misy fotoana aza ho an'ny tsiro rehetra, ny tifitra ambany dia hidina amin'ny tantara. Niverina tamin-kery ny mpiara-miasa aminy mba hanitatra kely kokoa ny silhouette antsika. Tsy isalasalana fa ny pataloha lava volo dia tonga lafatra mba hanohizana mampifangaro azy ireo amin'ny lobaka fohy kokoa. Na dia izany aza bodysuits sy lobaka fototra handeha tsara izy ireo miaraka amin'izy ireo. Na miresaka pataloha vinyl miloko na mainty isika, ny fotsy hatrany ambony dia hanome satroboninahitra antsika ho tonga lafatra.
Ny maha-izy azy ny pataloha vinyl
Na dia maneho ny lokon'izy ireo aza izahay, tsy misy isalasalana fa ny originality an'ity karazana pataloha ity dia lasa lavitra kokoa aza. Ireo fotokevitra avo lenta sy miloko dia mandeha tsara amin'ny antoandro sy ny endrika tsy mahazatra. Fa misy dikanteny amin'ny endrika pataloha voapaika izay azo ampidirina amin'ny fitafianao hariva. Akanjo mainty sy kapa na baoty lava voditongotra avo Izy ireo no ho kojakoja tonga lafatra hamita endrika toa izao. Ny fivarotanao lamaody lehibe toy ny Asos, Mango na Zara, ankoatry ny hafa, dia hifidy izany karazana pataloha.
Raha ny fahitana azy dia lamaody tadiavina izy io, ny dikan-teny samihafa dia tsy ela akory izay. Tsy misy isalasalana, manome anao loko vaovao amin'ny manga indray izahay. Asos dia miasa majika amin'ny akanjo tsirairay ary amin'ity tranga ity dia tsy ho ajanona any aoriana io. Ny famirapiratana sy ny fiakarana avo lenta no mpiorina voalohany amin'ireo pataloha ireo. Fa raha tianao ny misy ny maha-izy azy, miaraka amin'ny filan'ny nofo, azonao atao ny misafidy pataloha misy kofehy na tsipìka. Fampifangaroana tonga lafatra hamerenana fomba tsy manam-paharoa. Raha tsy misy isalasalana, amin'ity tranga ity dia vitantsika amin'ny kiraro avo-heeled izany. Mihoatra noho ny hevitra tsara hivoahana amin'ny fety isaky ny mila isika. Raha tianao ireo pataloha ireo dia azonao antoka fa ho tianao ireo hevitra ireo. Hahazo ny fironana amin'ny taona 2018 ve ianao?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » fironana » Pataloha vinyl, ny fironana izay tonga ny fanitsakitsahana
Tanjona hatsaran-tarehy azonao tanterahina
Midira maimaim-poana amin'i Bezzia ary raiso amin'ny mailakao ny atinay rehetra
Loharano fanampiana ho an'ny tena
Ny fanaovana tatoazy
Tonga ny Black Friday!
Jereo ny safidintsika miaraka amin'ny fihenam-bidy tsara indrindra amin'ny teknolojia
★ JEREO NY TOROKA ★